NORWAY: Booliska Oslo oo ganaax lacageed guryaha ugu geeyay dibedbaxayaal - Calanka.com
Calanka.com » Norway » NORWAY: Booliska Oslo oo ganaax lacageed guryaha ugu geeyay dibedbaxayaal
July 4, 2020 ( July 4, 2020 ) 0 Comments 0 Views5
Booliska caasimadda dalka Norway ee Oslo ayaa ganaax lacageed oo xanuun badan guryaha ugu geeyay dad ku dibedbaxay maalmo ka hor bannaanka hore ee suuqa Mortensrud ee waqooyiga magaalada Oslo, waxaana dibedbaxayaashaasi ku jiray dad soomaali ah.
Dibedbaxyaashaasha ayaa kasoo horjeeday Ururka SIAN oo loo soo gaabiyay “Stopp islamiseringen av Norge” islamarkaana micneheedu yahay “jooji islaameynta Norway” oo isu-soobax ku qabsaday xaafadda Mortensrud ee degmada Søndre Nordstrand ee magaalada Oslo.
Dibedbaxa SIAN oo qorsheysnaa islamarkaana boolisku gaar ka hayay ayaa waxaa uu la kulmay dibedbax kale oo lagaga soo horjeeday, waxaana goobta ka dhacay rabshad sababtay in boolisku soo afjaro dibedbaxaasi islaam-naceybka xambaarsanaa.
Madaxa ururkan oo lagu magacaabo Lars Thorsen, islamarkaana goobta khudbad ka jeedinayay ayaa waxaa lagu weeraray ukumo, yaanyo iyo agab kale.
Lars ayaa weerarkan la kulmay mar uu khudbaddiisa bilaabay oo uu ku weeraray islaamka.
Booliska oo ka duulayay carqaladeynta dibedbaxaasi oo dhacday labo isbuuc ka hor ayaa guryohooda iminka ugu geeyay qaar ka mid ah dibedbaxayaasha warqad ganaax oo ay ku qoran tahay lacag dhan 12-kun kr oo u dhiganta qiyaastii 1300 oo dollar.
Warqadda ayaa waxaa sidoo kale ku qoran in ciddii bixin weysa ganaaxaas lacageed ay gali doonto xabsi 22 casho ah.
Dibedbaxayaasha kasoo horjeeday ururkan ayaa sitay boorar ay qaarkood ku qornaayeen «Ingen rasister i våre gater» oo micneheedu yahay “uma dooneyno cunsuriyaal waddooyinkeena”.
Ugu dambeyn booliska ayaa ugu baaqay ururka SIAN in ay soo afjaraan dibedbaxooda maadaama laga cabsi qabo in ay xaaladdu waji kale yeelato.
Dadkii kasoo horjeeday ayaa ku farxay markaasi go`aanka uu boolisku ku joojiyay dibedbaxan looga soo horjeeday islaamka.
OSLO: Nin noorwiiji ah oo kala tuuray naag muslimad ah oo la ganaaxay
Booliska magaalada Oslo ayaa waxaa uu ganaax lacageed oo gaareysa 8000 oo kroner waxa uu duldhigay nin noorwiiji ah kaas oo kala tuuray...
NORWAY: Haweeney hilib xalaal ah ka dalbatay shirkad oo loogu soo badalay doofaar
Haweeney norwiijiyad ah islamarkaana muslim ah ayaa hilib xalaal ah oo ay ka dalbatay shirkad hilbaha qasha loogu soo badalay hilib khaansiir ama...
Booliska dalka Norway waxaa ay shalay gelinkii hore ay xabsiga dhigeen nin maalqabeen ahaa kaa soo muddo labo sano ka hor xaaskiisa la...